Sweden oo diyaarad kormeerta u diraysa qaxootiga doomaha | Somaliska
Wasaarada difaaca Sweden ayaa ku deeqday diyaarad kormeer ku samayn doonta xuduuda badda ee u dhaxaysa Africa iyo Yurub. Diyaaradaan ayaa ah mid casri ah oo ujeedkeeda yahay in ay aqoonsato doomaha yaryar ee ay saaranyihiin muhaajiriin ku soo wajahan qaarada Yurub.
Diyaarada ayaa loogu deeqay Hay’ada midowga Yurub ee qaabilsan kormeerka xuduudaha ee loo yaqaan Frontex. Wasiirka difaaca Sweden Karin Enström ayaa sheegtay in Sweden ay muhiimada siinayso badbaadada dadka sidaas darteedna ay ugu deeqday diyaaradaan oo waajibkeeda uu noqon doono in ay ogaato marka doomaha ay saaranyihiin muhaajiriinta ay qatar ku jiraan.
Go’aanka Sweden ayaa ka dambeeyay ka dib markii sanadkaan ay ku dhinteen dad ka badan 300 qof badda u dhaxaysa Libya iyo Talyaaniga.
badhiir ali says:
Asc kadib adbaan idin slanaya maxa jira dhiib hayista dadken somalida aha oo aha inay anay badi fahamiin wadaanka ama ay xakamayiso dintu ama dhiibta ubadaan waa caruuta iswidhan joota wayo waxa jira caruurta iyo walidiinta aqon isugu dhiiman oo anla dareemayin oo aha inu ula dhaqmo ilmha sidi uu jogo somaliya